ILHAAN CUMAR oo sharaf dhac ku tilmaantay tallaabo uu qaaday Donald Trump - Caasimada Online
Home Dunida ILHAAN CUMAR oo sharaf dhac ku tilmaantay tallaabo uu qaaday Donald Trump
ILHAAN CUMAR oo sharaf dhac ku tilmaantay tallaabo uu qaaday Donald Trump
New York (Caasimadda Online) – Ilhaan Cumar, oo ka tirsan Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamtay cafiska Madaxweyne Trump u sameeyay afarta ilaaliye ee kamidka ahaa shirkadda calooshood u shaqeystayaasha ee Blackwater, kuwaasi oo looxukumay dilka 14 qof oo rayid Ciraaqiyiin ahaa.
“Sannadkii 2007, afar qandaraaslayaal Blackwater ah ayaa rasaas ku furay isgoyska dadku ku badan yihiin ee magaalada Baqdaad, halkaas oo ay ku dileen 14 qof oo rayid ah oo reer Ciraaq ah,” ayay Ilhaan kusoo qortey barteeda Twitter-ka kadib war-saxaafadeedka kasoo baxay Aqalka Cad.
Xildhibaanadda ayaa hadalkeeda intaas ku dartey: “Toddobaadkan, Donald Trump wuxuu siiyay cafis shuruud la’aan ah. Tani waxay sharaf dhac ku tahay dalkeenna iyo ku dhaqanka sharciga.”
Ilhaan oo Mareykanka ku gashay qaxooti ahaan markii qoysaskeeda uga qaxeen Soomaaliya sababo ku aadan colaada ka jirtay ayaa sheegtay in talaabada Trump ay dureyso farqiga dilka saxda ah iyo kan ola-kaca-ah.
Shaqsiyaadka uu saamaxay Trump ayaa ahaa qandaraaslayaal ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka. Falka ay ku laayeen muwaadiniinta Ciraaq ee uu ku jiro cunug yar wuxuu dhacay 2007-dii.
Sidda ay sheegeen goobjoogeyaal waqtigaa ka akdhowaa goobta, waxaa dhacdadaas ku dhaawacmay 17 kale oo meesha joogay.
Qareenada difaacaya ragga ayaa ku dooday in ay rasaasta rideen kadib markii ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen kooxaha kacdoonka Ciraaq.
Nicholas Slatten oo lagu helay dil darajada koowaad ayaa lagu xukumay xabsi daa’in bilaa cafis ah. Dacwad oogeyaashu waxay sheegeen inuu isagu ahaa qofkii koowaad ee xabadda riday iyadda oo aan la daandaansan.
Paul Slough, Evan Liberty iyo Dustin Heard ayaa lagu xukumay dil toogasho ah sanadii 2014 kadib dacwad mudo bilo qaadatay ka socotay maxkamada federaalka ee Washington.
Qoraal ka soo baxay Aqalka Cad oo lagu shaaciyay cafiska madaxweynaha 22-kii bishii Diseembar ayaa lagu sheegay in go’aanka uu ku yimid taageero ballaaran oo dhinaca shacabka ah, waxaana intaa raacisay in raggaasi ay leeyihiin “taariikh dheer oo ay Qaranka ugu adeegayeen”.